BUDDHIST TERMS' Dictionary: DISCIPLE - အန္တေ၀ါသိကာ
DISCIPLE - အန္တေ၀ါသိကာ
အန္တေ၀ါသိကာ - အနီးနေတပည့်၊ အနီးနေရဟန်းသာမဏေ။
(၁) ပဗ္ဗဇ္ဇန္တေ ၀ါသိက - ရှင်ပြုပေးအပ်သော တပည့်၊
(၂) ဥပသမ္ပဒန္တေ ၀ါသိက - ပဉ္စင်းပြုပေးအပ်သော တပည့်၊
(၃) ဓမ္မန္တေ ၀ါသိက - စာချပေးအပ်သော တပည့်၊
(၄) နိဿယန္တေ ၀ါသိက - နိဿယည်းဟူ၍ နေသောတပည့်။
A close pupil;asamanera orabhikkhu living closely to the teacher
There are four kinds of disciples –
(1)adisciple who has been novitiated asasamanera, pabbajjantevᾱsika.
(2) A disciple who has been ordained asabhikkhu, upasampadantevᾱsika.
(3) A disciple who has been instructed in the doctrine, dhammantevᾱsika.
(4) A disciple who emulates his teacher, nissayantevᾱsikab.